Yikuphi ukubona izinja?
Kunezinkolelo eziningi mayelana nokuthi yimiphi imibono kuzinja. Eqinisweni, ukubona izinja kuzwela ngokulingana nokubona kwanoma yimuphi omunye umzingeli. Inja inomkhakha wokubukwa kabanzi. Umbala ngokwawo awubalulekile ngokukhethekile.
Izinja zingcono kunabantu ukuhlukanisa ngisho nokunyakaza okuncane kude. Kodwa-ke, ngesikhathi esifushane babona okubi kunathi. Iso lenja licebile kakhulu kunomuntu. Ngokuvamile, isimo se-lens sishintsha, sandisa ubude besikhathi eside, kepha lokhu akukwenzeka ngendlela ephumelelayo njengomuntu. Ukuzwela kweso lenja kuphakeme kunelabantu, kodwa kunzima kakhulu ukuhlukanisa phakathi kwezinto ezihleliwe ngokuphelele kunoma iyiphi ibanga.
Umbono wendawo yokuphambana uhluka kakhulu phakathi kwezinhlobo zezilwane. Ngokuvamile, kuxhomeke endaweni esenzakalayo futhi usike iso ngokwayo.
Wonke ama-shades wegrey
Kuyinto encane ukukholelwa ukuthi izinja zinamehlo amnyama namhlophe. Ngokuvamile, umbala wombala ukhona ezinja, kodwa hhayi ngendlela ecacile. Umbono wombala awubalulekile kakhulu kubantu abadliwayo, ngokuqondene nezilwane, okuphila kwabo kuxhomeke kumajikijolo enemibala, izithelo ezikhanyayo, imbewu kanye namantongomane. Iso leja linesakhiwo esivamile, esivamile kubo bonke abameleli bomthetho wezilwane ezidlayo. I-retina iqukethe amangqamuzana amaningi anesithombe - izintambo. Yilawa maseli abonakalisa konke okubonwa emthunzini omhlophe nomnyama. Izinduku zizwela ukukhanya, ngisho namazinga aphansi okukhanya. Amaseli akhethekile ombono wombala - ama-cones - ase-retina ngendlela encane kakhulu.
Abafundi bamehlo enja banekhono lokukhulisa kakhulu ukuze bambambe ngangokunokwenzeka konke ukukhanya okungenzeka, ukuthuthukisa ikhwalithi nokusebenza kombono ebusuku.
Izilonda ze-Lacrimal zivikela i-cornea ekungeneni okungenzeka. Izinja zinayo ijwabu leso lesithathu, elihlala livaliwe njalo. Umsebenzi walo oyinhloko ukuvikela nokuhlanza iso lokungcola kwangaphandle.
Ngokushesha noma kamuva, abanikazi baqala ukuqaphela ukuthi inja iyaphela. Ukuze ulahle konke ukungabaza noma, ngokuphambene nalokho, ukuze uqinisekise ukwesaba kwabo, kubalulekile ukwazi ukuthi ungabheka kanjani amehlo enja endlini. Ungathutha izinto ezincane zombala ompunga eduze nenja, isibonelo, ugoqa amabhola phansi. Njengoba izinja zisabela ngokuqinile ekunyakaza, zizolile ukusabela kwenja, futhi hhayi ikhono lokugxila ekubukeni ngendlela efanele yendaba kungakhuluma ngezinkinga nombono. Ukulahleka kombono ezinja kuvame ukuhambisana nezinye izibonakaliso zomzimba zesifo. Ukubomvu kwamehlo, i-clouding ye-lens, i-pus, i-spotting, itching, i-anxiety, ukulahleka kokuma endaweni. -Konke lokhu kungase kubonise ukuthi kungenzeka ukuthi ubumpumputhe kungenzeka. Isilwane esinjalo kumele siboniswe ngesikhathi esithile kubachwepheshe futhi yonke imingcele enqunywe udokotela kufanele yenziwe. Futhi, kuyadingeka ukuhlukanisa ukudla ngendlela efanele futhi ukuzungeze isilwane ngothando olubili nokuthandana, ukuze athule ngokuthula endleleni entsha yokuphila engavamile emhlabeni wobumnyama.
Ikati laseBrithani elide
Inja idla izimpukane izindlebe
Ngabe ama-kittens aguqula amazinyo amantombazane awo?
Tracker for izinja
I-Rhodesian defgeback - izici zohlobo
I-Terrier yase-Ireland - imithetho eyisisekelo yokunakekelwa
Amagama ama-parrots amantombazane - okukhethwa kukho okukhethwa kukho okungcono kwamamaki
Yini ongayidla ikati yaseBrithani?
Indlela yokufundisa u-Spitz kumbukiso?
Grandorf for amakati
Ukudla okumile ngenxa yamantombazane
Ukudla kucebile ku-fiber
Kubonakala kusukela ekuphenduleni kwebusika - zokupheka
Amagama emibala nemibala
UChris Jenner noCory Gamble banquma ngosuku lomshado
Ukunyakaza kwe-Fetal ngesikhathi sokukhulelwa
Izinkanyezi zikhonjiswe ekusekeleni uKim Kardashian
Izinwele zokudoba ezimfushane 2013
Izitsha ezimangalisayo nezempilo nge-ithanga
Amabhuzu enjoloba ye-Crocs
Kungani ikhanda lami ligijima?
Ushukela weCoconut - okuhle nokubi
Bang izinwele ezinde 2015
Igumbi lesitayela se-Loft
Ukulingana kwezinombolo ngewashi
Ungadonsa kanjani i-swimsuit ngezandla zakho?
Ukukhishwa kwamakhandishi ekhishini odongeni
Ukushayela nge-curd amabhola
Ukwelashwa kwesifo se-Alzheimer nge phytotherapy
Izindebe zeRibok - iqoqo elisha 2014